Global Voices teny Malagasy » Shina: Resaky Ny Mpiserasera Momba Ny Zanabolana Alefan’i Korea Avaratra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Marsa 2012 15:32 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Etazonia, Japana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Shina, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka
Nanambara  i Korea Avaratra Tamin'ny 27 Martsa 2012 fa tsy hilaozany ny tetikasany handefa zanabolana amin'ny tapaky ny volana Aprily  na dia eo aza ny fitsidihana avo lenta nataon'ny Filohan'i Etazonia Barack Obama tao Korea Atsimo tamin'ity herinandro ity. Nandeha dia nandeha ny resaka tao Korea Atsimo sy Japana, ity farany izay vao avy nikarakara ny rafi-piarovana amin'ny balafomanga raha toa ka miditra amin'ny faritra an'habakabak'i Japana ny mpitondra zanabolana.
Amin'ny maha firenena namana akaiky an'i Korea Avaratra, somary malina ihany ny filoham-pirenena ao Shina, Hu Jintao amin'ny filazana ny heviny. Tao amin'ny tambajotra sosialy, nanintona ny sain'ireo mpiserasera ny vaovao saingy samy manana ny heviny kosa izy ireo.
Tamin'ny adihevitra mikasika ny vaovao ao amin'ny Sina Weibo , mpiserasera sasany mahita fa manana herim-po i Korea Avaratra hifanatrika amin'ny fanjakazakana tokan'i Etazonia:
@superman哥哥：Voalaza tsara. Ahoana no fomba ahafahan'ny firenena hafa manakana firenena iray tsy handefa zanabolana. Ahoana no fomba hanakanana ny hafa tsy hihinan-kena kanefa ianao tia mihinan-kena!!!
@称成：tohano Korea Avaratra. Manana ny fahaizana ilaina sy ny herimpo izy.
@肥鸭KidAtCardiacSurgery：Marina tokoa, tokony hanana ny zony handefa zanabolana ny firenena mahaleotena. Mihoatra ny loha ny vazivazy! Ahoana ny fomba ahafahan'ny firenena hafa mitsabaka amin'ny raharaha anatin'ny firenena hafa?
@LGX9930：Tsy zo aman-dalàna ihany ny fandefasana zanabolana ho an'ny firenena mahaleotena iray. Fa ilaina amin'ny fampandrosoana ny toekarena ao amin'ny firenena ihany koa. Eny, tsy hiala amin'izany izy. Afaka mandefa zanabolana ny firenena matanjaka fa ny firenena kely kosa tsy afaka manao izany?
@长河落日故乡人：Ahoana no tsy misy mandrisika an'i Etazonia sy Korea Avaratra mba samy halalaka eo amin'ny lafiny nokleary?
@路殿下：zanabolana, bala-tafondro sy fitaovam-piadiana nokleary, mila vola avokoa izany rehetra izany. Raha hiala amin'ny fampandrosoana ny teknolojia ara-miaramila izy ireo, tsy afaka hahafehy ny fireneny intsony i Syria sy Iran. Fahoriana ho an'i Etazonia ny tanjaky ny Firenena manana nokleary. Fantatr'i Korea Avaratra tsara fa tsy afaka miankina amin'ny rahalahiny goavambe [Shina] intsony izy, fa afaka mihazona fotsiny ny fifehezany ny fampandrosoana ny herin'ny miaramila. Tombotsoa ho an'ny Shina mandritra ny fotoana fohy ny paikady toy izany, na koa mety tsy hanana herimpo hifanatrika an'i Etazonia izy.
@子虛烏有-先生：Sorena mafy amin'izany sehatra izany i Obama. Tsy hiala mihitsy anefa i Korea Avaratra na hatakalo fanampiana ara-tsakafo aza, manao izay haha-fihomehezana an'i Etazonia. Fanjakazakana tokana, mandehana manjavona.
穗海原川：Tsarovy fa matin'ny hanoanana isika tamin'ny taona 1958, mbola nandefa zanabolana maro foana anefa isika. Hatsarao endrika [i Korea Avaratra] ka avelao handefa ny zanabolany na zanabolana miafin'endrika.
Tao anatin'izany, nanamafy ny hafa fa mety hanimba an'i Shina ny fandrosoan'ny zanabolana ao Korea Avaratra:
@Daniel桑：namaly an'ny @昊孟中月: ampiasao ny atidohanao azafady. Ahoana no fomba hamelantsika ny mpitandro ny filaminana hitondra basy raha toa ka tsy mamela ny mpangalatra hanao toy izany koa. Fantatrao ve ny dikan'ny fandefasana zanabolana kasain'i Korea Avaratra atao? Aretinan-doha ho an'ny Shina izany.
@热气青年3代：Tahaka ny manome antsy voaranitra tsara ho an'ny adala.
mjintokyo：Alaska ihany no mety ho tratran'ny balafomangan'i Korea Avaratra. Fa tratrany avokoa ny zoro rehetra ao Shina. Ho an'ireo izay manohana an'i Korea Avaratra, mihevitra ve ianao fa tsy manahy amin'izany i Shina?
Nisy koa ny fanehoan-kevitra esoeso tahaka ity manaraka ity:
@吉普寨老农：Tsara. Tokony hijoro hatrany i Korea Avaratra ary miatrika ady mafy. Fa raha vao manomboka ny ady dia hanjavona ao anatin'ny iray volana ny mpanao didy jadona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/29/31238/
 handefa zanabolana amin'ny tapaky ny volana Aprily: http://www.northkoreatech.org/2012/03/16/north-korea-to-launch-satellite-in-april